Akụkọ - China Europe International Trade Digital Exhibition In ẹkenịmde ke Beijing
China Europe International Trade Digital Exhibition, nke China CCPIT kwadoro, China Chamber of International Commerce na China Service Trade Association jikọrọ ọnụ ọnụ, emere na Beijing na October 28 afọ a.
Ngosipụta a bụ iji cheta afọ 45 nke mmekọrịta mmekọrịta mba Sino-European, iji kwalite mmekọrịta dị n'etiti China na Europe, iche ihe ịma aka sitere na COVID-2019 na iji bulie usoro ndị bara uru na nkwado dị elu na mmepe nke Sino-Europe Economy na azụmahịa . Ihe ngosi a gara n’ihu ihe dị ka ụbọchị iri, na-achọ ịtọlite ​​usoro nkwukọrịta maka ụlọ ọrụ China na nke Europe site na “Trade Promotion Cloud Exhibition” n’elu CCPIT Digital Exhibition Service Platform, nke nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịchọta ohere na-akwado ma gbasaa ahịa mba ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, akụ na ụba ụwa na-ata ahụhụ na nchebe na mbilite otu. Kemgbe afọ a, nke COVID-2019 na-emetụta, ọ dara ọdịda akụ na ụba ụwa na nnukwu ahịa na azụmaahịa mba ụwa. Naanị na-ekwusi ike na ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ, yabụ anyị nwere ike ijikọ aka na nsogbu ịma aka mba ụwa ma nwee ọganiihu na mmepe. China CCPIT ga-aga n'ihu na-akwado otu ọ bụla iji mepụta ikpo okwu ka mma maka azụmahịa azụmahịa nke Sino-Europe, iji nye ọrụ ka mma na mma dị mma.
E nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ 1,200 sitere na mpaghara 25 dịka Liaoning Province, Hebei Province, Shanxi Province wdg na-ekere òkè na ngosi a. Ngwaahịa ngwaahịa ahụ na-ekpuchi akụrụngwa ọgwụ, akụrụngwa ụlọ na ngwaike, ọfịs ọfịs, arịa ụlọ, onyinye, oriri elektrọnik, ngwa ụlọ, textiles na uwe, nri wdg, yana mpaghara ọrụ dịka ụlọ ọrụ ọhụụ, ọrụ teknụzụ wdg, nrụpụta pụrụ iche. Mpaghara Ngosipụta Ngwunye Ihe '. Ihe karịrị ndị zụrụ ihe karịrị 12,000 sitere na mba 40 dị na Europe dịka Norway, Sweden, Netherlands na ndị ọzọ so na ya, bụ nke ghọtara nkwukọrịta ahịa n'ịntanetị na ịgbasa ahịa ahịa ga-eme n'ọdịnihu site na ịntanetị ka ha nọ n'ọfịs ahụ.